03/01/2005: Submitted for publication via web
Ujeedo Xog Ururuuin Ka Timid Ururka Qoraaga Somaliland
Ka: Ururka Qoraaga Somaliland
Mudo haatan laga joogo shan bilood ayuu ururka "Somaliland Writers Associaton" SWA dood ka yeeshay sidii loo soo saari lahaa buug faa'iido u yeesha dadweynaha reer Somaliland ama cidkasta oo akhriyi karta farsoomaaliga. Waxaana dooddaas lagu kala doortay dhawr qodob. Go'aankiina waxa uu noqday in wax laga qoro Caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Buuggaasi waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo kala jaadjaad ah sida: Taariikhda, deegaanka, halganka, fanka iyo suugaanta iyo kaalintii Hargeysa. Wuxuuna buuggaasi u badan doonaa sawirro laga soo qaado magaalada Hargeysa.
Hadaba annaggoo hawshaas badhtanka kaga jirna ayaanu isla garannay inaanu u soo bandhigno dadweynaha kala jooga dacalladda adduunka. Waxa hubaal ah in ay jiraan dad badan oo wax ka haya taariikhda Hargeysa. Waxa kale oo hubaal ah in ay jiraan dad farabadan oo qofkastaa wax muhiim ah ka hayo Hargeysa, ha-noqoto sawir muhiim ah oo la qaaday mar hore, ha-noqoto taariikhdii hore ee magaalada, hanoqoto qof tilmaan naga siiya meelaha laga heli karo qoraallo muhiim ah oo ku saabsan Hargeysa iwm.
Ugu danbayn waxaanu dadweynaha sharafta leh ka codsanaynaa inay si hagar la'aan ah noogala soo qayb galaan hawsha ballaadhan ee aanu dusha u ridanay. Hawshaas oo aanay jirin cid gaar ah oo naga caawinaysa ha noqoto dawlad ama urur kaleba ee aanu ku tashanayno karaan-kayaga. Annagoo hawshaa u galnay sidii aanu wax faa'iido leh ugu soo kordhin lahayn dalkeenna iyo dadkeenaba ayaanu markale akhristoow waxaanu kaa codsanaynaa inaad nagu taakulay-sid wixii warbixin aad ka hayso Caasimmadda Somaliland ee Hargeysa. Waxaanaad nagala soo xidhiidhaa Emailka hoos ku qoran:
Ururka Qoraaga Somaliland "SWA
The views published here are solely those of its authors (SWA) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.